Sidee loo cabiraa dhulgariirka? | Saadaasha Shabakadda
Dhulgariirkii maanta ruxay bartamaha Jasiiradda Iberian Peninsula shaki inaga gelin kara waxa dhabta ah iyo sida dhacdadan saadaasha hawadu u dhacdo in marar badan uu ahaa halyeeyada wararka.
Tallaabada isha dhulgariirka ila ila gal si aan wax badan uga barto.
Dhul gariirku waa dhacdo ay sababaan a ruxitaanka qolofka dhulka iyadoo ay ugu wacan tahay kala-go'idda taarikada tectonic in, inkasta oo aan la arki karin, ay qaabeyso dusha sare ee meeraheenna. Meel kasta oo ay ku taal cirif saxan waxaad ka heli kartaa buurta dhexdeeda, illaa waxa loo yaqaan cilladaha, taas oo ah wax dhaca marka laba taariko kala baxaan. Kiiska ugu fiican ee la yaqaan waa Waqooyiga Ameerika, halkaasoo khaladka San Andrés uu ku yaal.
Meelahan waxay diiwaan galiyaan dhulgariirrada ugu waxyeellada badan, xitaa gaara inuu yeesho xoog 7.2 on qiyaasta Richter ah. Oo ka hadlaya miisaanka ...
Sidee loo cabiraa dhulgariirka?
Inkasta oo miisaanka ugu fiican ee la yaqaan uu yahay kan Richter kaas oo kaliya cabbiraya baaxadda ay leedahay ifafaalaha, khubarada ayaa sidoo kale adeegsada Miisaanka Mercalli si loo cabbiro cawaaqibka ka dhalan kara deegaanka, iyo qiyaasta seismological-ka xilligan si loo qiimeeyo adkaanta dhagaxa iyo masaafada uu soo maray.
Khariidadan Waad arki kartaa xooga ay dhulgariirradu yeelan karaan haddii ay taabtaan ciidda Isbaanishka marka loo eego miisaanka 'Richter', taasi waa in la yiraahdo:
Intensity of 3 or less: inta badan lama dareemo, laakiin si isku mid ah ayaa loo duubaa. Badanaa ma sababo dhaawac muuqda.
Cufnaanta 3 illaa 6: waxay muujineysaa. Waxay sababi kartaa dhaawac yar.
Xad-dhaafka 6 ilaa 7: Waxay u geysan karaan dhaawac culus magaalooyinka oo dhan.
Xad-dhaafka 7 ilaa 8: Burburku aad buu uga muhiimsan yahay Waxay burburin kartaa dhul ka badan 150km.
Dhulgariirrada ka sarreeya 8 digrii waxay sababi karaan khasaarooyin maadiga ah oo baaxad leh oo ku dhaca aag dhawr km ah. Laakiin ma jiraan wax diiwaan ah oo lagu gaadhayo baaxaddaas dalkeenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay dhulgariirro sideese loo cabiraa?
Duufaan Duufaan Waxaan rabaa inaan noqdo duufaan duufaan